Orinasa mpamokatra zezika NPK, mpamatsy - Mpanamboatra zezika China NPK
Ny zezika azo vonoin'ny rano tanteraka dia zezika mitambatra singa maro izay mety ho levona anaty rano tanteraka. Azo levona haingana ao anaty rano izy io, ary mora entin'ny voly, ary avo lenta ny tahan'ny fandraisana azy sy ny fampiasana azy. Ny tena zava-dehibe dia azo ampiharina amin'ny famafazana ny fambolena Facility, toy ny fanondrahana rano mitete, mahatsapa ny fampidirana rano sy zezika ary mahomby amin'ny fitsitsiana rano, zezika ary asa.
Azo ampiasaina betsaka amin'ny legioma, voankazo, zaridaina, anana, bozaka ary fambolena vola hafa, indrindra ho an'ny trano fivoahana, micro-irrigatrion, fanondrahana mitete. Azo ampiharina amin'ny fampidirana rano sy zezika, fanaraha-maso tsara, fambolena tsy misy tanany ary fambolena hafa maoderina sy mahomby.
Ny zezika NPK Compound dia manana tombony amin'ny atiny mahavelona be, singa kely vitsivitsy ary fananana ara-batana tsara, izay mitana andraikitra lehibe amin'ny zezika voalanjalanja, manatsara ny tahan'ny fampiasana zezika ary mampiroborobo ny vokatra azo sy azo antoka.